Chitatu, Kukadzi 24, 2021 Chitatu, Kurume 24, 2021 Douglas Karr
Kwemakore, ini ndakabatsira mazana emasangano nekuvaka kwavo zvemukati marongero uye kugadzirisa kwavo kwese kutsvaga injini kuoneka. Maitiro acho akatwasuka mberi Mudziyo - Ita shuwa kuti yavo saiti ruzivo rwakakwirira pane desktop uye kunyanya nhare. Kugadzira - Simbisa saiti yavo inokwezva, nyore kushandisa, uye inogara yakamisikidzwa nezvakanaka uye mutsauko. Zvemukati - Simbisa kuti vane zvemukati
Mufananidzo wemuvaki wakachenjera nebenzi: Mvura yakanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo, asi haina kudonha, nekuti yakange yakateiwa paruware. Mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa, akasaaita, uchafananidzwa nemurume benzi, wakavaka imba yake pajecha. Mateo 7: 24-27 Anoremekedzwa waaishanda naye uye shamwari yakanaka Lee Odden akatumira tweet vhiki ino kuti: "Webhusaiti yako haisi